Warshada Qaybta Soo kabashada ee NGL |Shiinaha NGL Soo-kabashada Qaybta Soo-kabashada, Soo-saareyaasha
20MMSCFD Rongteng qaab qaabaysan NGL dib u soo kabashada
Gaaska nadiifka ah ee hadda ka buuxa biyaha wuxuu u socdaalaa nidaamka shaandhada molecular ee fuuq-baxa. Sida gaasku u dhex socdo sariirta shaandhada molecular, biyaha ayaa si doorbidaya u nuugaya soo saarista gaas qalalan oo nadiif ah, diyaar u ah inay soo bandhigto heerkulka cryogenic ee looga baahan yahay soo kabashada qoto dheer ee NGL. gaasku wuxuu u guuraa qaboojiyaha qaboojiyaha halkaasoo qaboojiyaha ku qaboojiyo gaaska diirran ee dhex mara gariirada qaboojiyaha.
2 MMSCFD LPG warshad ka soo kabashada Shiinaha Rongteng shirkadda
Gaaska dabiiciga ah ee ceyriinka ah wuxuu galaa kala-soocida gudaha si uu u shaandheeyo wasakhda farsamada oo uu u kala saaro biyaha xorta ah, ka dibna wuxuu galaa kombaresarka ka dib markii si sax ah loo sifeeyo shaandhada boodhka, waxaana lagu qaboojiyaa 40 ~ 45 ℃ qaboojiyaha laftiisa, ka dibna kala sooca. qaar ka mid ah biyaha iyo hydrocarbons culus (haddii ay dhacdo qaybo culus oo xad-dhaaf ah), ka dibna waxay galaan qaybta fuuq-baxa ee fuuq-baxa qoto dheer.
8MMSCFD gaaska dareeraha ah ee soo kabashada gaaska dabiiciga ah
Waa maxay sababta loo soo kabsado dareeraha gaaska dabiiciga ah: Hagaajinta tayada gaaska dabiiciga ah, la yareeyo barta sayaxa hydrocarbon iyo ka hortagga uumiga dareeraha hydrocarbon ee gaadiidka dhuumaha;Alaabta uumiga ah ee la helay ayaa ah shidaal rayid ah oo muhiim ah iyo shidaal kiimikaad;Heerka ka faa'iidaysiga kheyraadka oo dhamaystiran ayaa la bixiyaa, kaas oo leh faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan.
Ku habboon 1 ~ 6 mmscfd LPG xarunta soo kabashada waxay sameysaa shirkad Shiinees ah
Soo kabashada gaarka ah ee LPG warshad soo kabashada gaaska dareeraha ah
LPG waa gaaska dareeraha ah ee batroolka, kaas oo la soo saaro marka la sifeynayo saliidda cayriin ama laga beddelayo habka saliidda ama ka faa'iidaysiga gaaska dabiiciga ah.LPG waa isku jir saliid iyo gaas dabiici ah oo lagu sameeyay cadaadis ku habboon oo u jira dareere ahaan heerkulka qolka.LPG (Gaaska Liquefied Petroleum Gas) ayaa si weyn loogu isticmaalaa sidii shidaalka kale ee baabuurta, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay quudinta kiimikaad ahaan.Waxay ka kooban tahay propane iyo butane (C3/C4).Dib u soo kabashada LPG/C3+ Qaybta Injineerinka waxay bixisaa nuugiye pr...
Xalka loo habeeyey ee dareeraha Gaaska Dabiiciga ah ee ka soo kabashada alaab-qeybiyaha Shiinaha
Qiimaha dareerayaasha gaaska dabiiciga ah, sida ethane iyo propane, ayaa sii kordhaya sababtoo ah baahida caalamiga ah ee sii kordheysa ee quudinta kimikaalka, kuleylinta iyo korontada.Dareeraha gaaska dabiiciga ah ee Rongteng (NGL) xalalka soo kabashada ayaa ah kuwo ku takhasusay si kor loogu qaado soo kabashada iyada oo ku siinaysa dabacsanaan hawleed sare iyo soo celin weyn oo ku saabsan maalgashiga dhirta.
Caadiga ah 2 ~ 14 104 Nm3/d iftiinka soo kabashada hydrocarbon ee gaaska dabiiciga ah
Hydrocarbon iftiin leh, oo sidoo kale loo yaqaan condensate gaaska dabiiciga ah (NGL), wuxuu daboolayaa C2 ~ C2 + oo ka kooban qaybo kondensate ah (C3 ~ C5) . Soo kabashada iftiinka hydrocarbon waxaa loola jeedaa dib u soo kabashada qaybaha culus ee gaaska dabiiciga ah marka loo eego methane ama ethane qaab dareere ah .
Soo kabashada hydrocarbon khafiif ah waxaa loola jeedaa habka soo kabashada dareeraha ee qaybaha ka culus gaaska dabiiciga ah marka loo eego methane ama ethane.Dhinaca kale, waxa ay ujeedadeedu tahay in la xakameeyo barta sayaxa hydrocarbon ee gaaska dabiiciga ah si loo gaaro tusmada tayada gaaska ganacsiga lagana fogaado socodka labada weji ee dareeraha ah.